Askari Isbaaroolihii ugu horeeyay oo lagu toogtay amarka Madaxweynaha. - Caasimada Online
Home Warar Askari Isbaaroolihii ugu horeeyay oo lagu toogtay amarka Madaxweynaha.
Askari Isbaaroolihii ugu horeeyay oo lagu toogtay amarka Madaxweynaha.
Dowladda Somalia iyo Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa u muuqda in markan ay wixii ay yiraahdaan ay dhab ka tahay oo ay fulinayaan.
Toddobaad ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha uu amar ku bixiyay in la dilo askari kasta oo shacabka isbaaro u dhiganaya ama si kale u dhibaya.
Ayaga oo ka dhabeenaya amarka madaxweynaha, ayaa ciidamada ammaanka ee degmada Dharkenley ee magaalada Muqdisho, waxa ay toogasho ku dileen askari fallaagoobay oo isbaaro dhigtay Xaafadda Suuq Boocle, halkaasi oo uu shacabka ku miranayay.
Maamulka degmada Dharkenley, ayaa lagu wargeliyay inuu jiro askarigaasi, oo uu ku laabtay goob hore isbaaro looga qaaday, halkaasna uu lacag ku dal dalanayay.
Maamulka, ayaa markaas kadib bixiyay amar uu siiyay ciidamada si askarigaasi wax looga qabto. Saaka ayaa ciidamada ammaanka Dharkenley waxa ay ku jarmaadeen askarigaasi, waxayna ugu tageen bartii isbaarada uu dhigtay, halkaasi oo ay ku toogteen, meydkiisana ka qaadeen.
Tani waxa ay digniin cad u tahay isbaarooleyda, oo ay u muujin doonta in xaalku uu hadal iska beddelay. Waxa kale oo ay muujineysaa in madaxweyne Xasan Sheikh uu soo jeestay oo wixii uu yiraahdo ay dhab ka yihiin.